Ingomzuzu oyikisayo: Umntwana wakho uya ekhaya esuka ngoLwesibili kwaye uxelela ukuba kukho uvavanyo ezintathu iintsuku ukususela kwiiyesixhenxe ezisixhenxe. Kodwa, ekubeni ilahlekelwe isikhokelo sokuhlaziya (okwesithathu kulo nyaka), utitshala uyenza ukuba aveze umxholo wokufunda ngaphandle kwayo. Awufuni ukumthumela egumbini lakhe ukuze afunde ngokungaboniyo kwincwadi yokufunda; Uya kuphumelela! Kodwa, nawe awufuni ukwenza wonke umsebenzi kuye.
Ke ngoku wenzantoni?
Ungesabi. Kukho indlela eya kufumana umntwana wakho ukuba ahlaselwe kwisicatshulwa sahluko nxamnye nomkhwa omncinci wokuba uthanda, kwaye nokuba bhetele, unokufunda ngaphezu kokuba wayetyenzisile ukuba wasebenzisa isikhokelo sokuhlaziya.
Makhe singene kule nkqubo.
Qinisekisa ukuba ufunda iSahluko sokuQinisekisa
Ngaphambi kokuba ufunde ne-kid yakho uvavanyo, uya kufuneka ukwazi ukuba ufunde umxholo wesahluko. Ngamanye amaxesha, abantwana abasayi kubaphulaphula ngelixa beklasi kuba bayazi ukuba utitshala uya kudlula isikhokelo sokuhlaziya phambi kovavanyo. Ootitshala, nangona kunjalo, bafuna ukuba umntwana wakho afunde okuthile; bafaka amathambo angenalutho kumxholo wokuvavanya kwiimakhishithi zokuphonononga enikeza ubungqina benkcazelo aya kufuneka bayazi. Akukho mbuzo wovavanyo oluya kuba khona!
Ngoko ke, kuya kufuneka uqinisekise ukuba umntwana wakho wayifumene ingenelo kunye nokuphuma kwesahluko ukuba ufuna ukufumana uvavanyo.
Indlela efanelekileyo yokwenza oko kukucwangciso lokufunda nokufunda njengoSQ3R.
Amathuba amahle ukuba uvile ngeCandelo leSQ3R . Le ndlela yasungulwa nguFrancis Pleasant Robinson kwincwadi yakhe ye-1961, iSifundo esiSebenzayo , kwaye ihlala isithandwa kuba iphakamisa ukuqonda nokufunda izakhono.
Abantwana kwisigaba sesithathu okanye sesine kubantu abadala kwiikholejini bangasebenzisa isicwangciso sobomi ukuqonda nokugcina izinto eziyinkimbinkimbi ezivela kwincwadi yesifundo. Abantwana abangaphantsi koko bangasebenzisa isicwangciso ngomntu omdala ekukhokela kwinkqubo. I-SQ3R isebenzisa ubuchule bokuqala, bokufunda nokubhala emva kokufunda, kwaye ekubeni iyakwazi ukwakha ukucaciswa kwemisebenzi , ukukwazi komntwana wakho ukubeka esweni isifundo sakhe, kuyisisombululo esisebenzayo kakhulu kuyo yonke imfundo kuwo onke amabakala aya kuhlangana nayo.
Ukuba ngaba ungaqhelekanga kwindlela, "SQ3R" isigama esichazela ezi nyathelo ezinhlanu ezisebenzayo umntwana oza kuthatha xa efunda isahluko: "Uphando, Umbuzo, Funda, Phinda ubuye uphinde uphendule."
Umntwana wakho uya kukhangela isahluko, ukufunda izihloko, amagama ajongene nesibindi, imihlathi yesingeniso , amagama omagama , iintloko , imifanekiso kunye nemifanekiso yokuqonda, ngokubanzi, umxholo wesahluko.
Umntwana wakho uya kuguqula nganye yesahluko sesahluko ibe ngumbuzo kwiphepha lephepha. Xa efunda, "I-Arctic Tundra," uya kubhala, "Yintoni iArtic Tundra?", Ushiye indawo ngaphantsi kwempendulo.
Umntwana wakho uya kufunda isahluko ukuphendula imibuzo ayenziwe. Kufanele abhale iimpendulo ngamagama akhe kwisithuba esinikeziwe.
Umntwana wakho uya kuguqa iimpendulo zakhe kwaye uzame ukuphendula imibuzo ngaphandle kokubhekisela kumbhalo okanye amanqaku akhe.
Umntwana wakho uya kuphinda afunde iziqendu zesahluko esingacacileyo. Apha, unokufunda kwakhona imibuzo ekupheleni kwesahluko ukuze avivinye ulwazi lwakhe lomxholo.
Ukuze indlela ye-SQ3R iphumelele, kuya kufuneka uyifundise umntwana wakho. Ngoko okokuqala isikhokelo sokuhlaziya siyahamba, sihlale phantsi kwaye siphumelele kwinkqubo, sihlolisise isahluko kunye naye, simncedise ukuba ifake imibuzo, njl. Mzekelo ngaphambi kokungena kuyo ukuze azi into enokuyenza.
Qinisekisa ukuba ugcina iSahluko sokuQinisekisa
Ngoko, emva kokusebenzisa isicwangciso sokufunda , unokuqiniseka ukuba uyayiqonda into ayifunayo, kwaye unokuphendula iimbuzo ozidalileyo kunye. Unesiseko solwazi oluqinileyo.
Kodwa kusekho iintsuku ezintathu ngaphambi kokuvavanywa! Awuyi kukulibala oko akufundileyo? Ngaba kufuneka uqhube loo mibuzo efanayo ngokuphindaphindiweyo ukuze uqiniseke ukuba ukhumbula?
Akukho ithuba. Ingcamango enkulu yokuba afunde iimpendulo kwimibandela ngaphambi kokuvavanywa, kodwa ngokwenene, ukumbala kuya kuphoqa loo mibuzo ethile, kodwa akukho nto enye, kwintloko yengane yakho. (Kwaye intsapho yakho iya kugula nayo yonke into, nayo.) Ngaphandle koko, kuthekani ukuba utitshala ubuza imibuzo ehlukile kunezo ozifundileyo kunye? Umntwana wakho uya kufunda ngakumbi ngexesha elide ngokufumana isidlo sokufunda isidlo kunye nolwazi njengeklasi ephambili kunye neyona ndlela ephakamileyo yokucinga njengecala elihle.
Iimpawu zeVen zixhobo ezigqibeleleyo zezingane kuba zivumela umntwana wakho ukuba acwangcise ulwazi kwaye aluhlalutye ngokukhawuleza kwaye lula. Ukuba awuqapheli ikota, umzobo weVenn ngumfanekiso owenziwe ngeembalo ezimbini zokungena. Ukuthelekiswa kwenziwa kwithuba apho izibonda zihamba khona; Ukwahlukana kuchazwa kwithuba apho izangqa azikho.
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuvavanya, mnike umntwana wakho umzobo weVenn kwaye ubhale enye yezihloko ezivela kwisahluko phezulu kwesangqa sesobunxele, kunye nesihloko esihambelana nayo kubomi bomntwana wakho kwenye. Ngokomzekelo, ukuba isicatshulwa sesiqendu sithetha nge-biomes, bhala "Tundra" ngaphezulu kweyodwa kwimijikelezo kunye ne-biome apho uhlala khona ngaphaya komnye. Okanye, ukuba ufunda ngo "Ubomi kwi-Plant Plymouth Plantation," unokuthelekisa aze ahluke ngoku "Ubomi kwiNdlu yakwaSmith."
Ngalo mzekeliso, ulungelelanisa iingcamango ezintsha kwiindawo zobomi bakhe esele aziqhelanise, okumnceda ukuba akhe intsingiselo.
Ikhasi elibandayo elizaliswe ngeenkcukacha alibonakali lokwenene, kodwa xa kuthelekiswa nento ayaziyo, idatha entsha ngokukhawuleza idibanisa into into ebonakalayo. Ngoko, xa ehamba ngaphandle ekukhanyeni kwelanga lokufudumala, unokucinga ukuba kubanda umntu unokuziva njani kwi-Arctic Tundra. Okanye ngeli xesha elizayo usebenzisa i-microwave ukwenza i-popcorn, unokucinga malunga nobunzima bokufumana ukutya kwi-Plymouth Plantation.
Isigama Ukubhala Ukukhuthaza
Enye indlela yokudala ekuncedeni umntwana wakho ukuba aqonde ngokupheleleyo isahluko sencwadi yolu vavanyo olukhulu oluza kuvela, lubandakanya ukuqala-ukudala into entsha ukusuka kolwazi olufumeneyo . Olu buchule bokucinga ngezinga eliphezulu luza kunceda uncede ulwazi olusuka kwi-textbook ngqo kwingqondo yomntwana wakho kunokuba ukukhumbula okusemthethweni kunakho. Indlela enandiphayo, engenakwenza ukuba umntwana wakho adibanise ulwazi lunezandla zokubhala ngokukhawuleza . Nantsi indlela yokuyibeka:
Njengoko umntwana wakho wahlola isahluko, wayemele aphawule amagama abhalwe ngesibindi ngamazwi ahlukeneyo. Masithi isahluko sasithetha ngamaThafa aseMerika aseMelika, kwaye wafumanisa amagama anjengehambo, umkhosi, ukuhlasela, ummbila kunye ne- shaman. Esikhundleni sokumkhumbula isicatshulwa, uya kuba neengxaki zokukhumbula, umxelele ukusebenzisa amagama amagama ngokukhawuleza njengolu hlobo:
Ukusebenzisa ubuncinane amahlanu amagama amagama kwisahluko, bhala ileta eya kwi-shaman evela kwiqhawe elisekho.
Utyelela kwiLizwe leMveli yaseMelika. Bhala u-1-2 umhlathi wenkcazo yezinto ozibonayo, ukuhogela nokuva usebenzisa ubuncinane ubuncinane begama lesihlanu kwisigama.
Unxweme lomntwana waseMelika waseMelika. Ukusebenzisa okungenani amahlanu amagama esigama esivela kwisahluko, uqinisekise umntu ongaphandle ukuba isizwe sakho siyindawo engcono yokukhula.
Ngokumnika imeko engenakuchazwa kwincwadi, njengombono womntwana, uvumela umntwana wakho ukuba ahlaziye ulwazi esele ephethe entloko yakhe ngolwazi oluvela kwisahluko afundwayo. Olu fusion ludala ibalazwe ukuba lifike kwiinkcukacha ezintsha ngosuku lokuvavanya nje ngokukhumbula ibali lakhe. Brilliant!
Zonke azilahlekanga xa umntwana wakho ebuya ekhaya ehlambalaza ngenxa yokuba wayelahlekisa umhlahlandlela wakhe wokuhlaziywa kwithuba le-umpteenth. Ngokuqinisekileyo, kufuneka ukuba athathe inkqubo yombutho kwindawo yokumnceda ukuba agcine umkhondo wezinto zakhe, kodwa okwangoku, unesistim ekhoyo ukumnceda ukuba agcine umkhondo webanga lakhe lokuhlola. Ukusebenzisa isicwangciso se-SQ3R ukufunda umxholo wokuvavanya kunye nezixhobo ezinjengeimpawu zeVenn kunye neendaba ezizimeleyo ukuqinisekisa ukuba umntwana wakho uya kuhlola isahluko sakhe kwaye uyazihlawulela ngokupheleleyo ngosuku lokuhlola.
Indlela yokubhala i-Five-Paragraph Essay
Amanani aseItali kubantwana kunye nabaqalayo
Incwadi ebhaliweyo yoBhala: iMigomo neMigangatho
Umkhombe waseVindija (Croatia)
Ukuqalisa Umkhiqizo omtsha - Iifom kwi Kontext
Izinto Ongazi Ngayo NgoSacha Baron Cohen's 'Bruno'
UJames Watt, Umthengisi weNjini ye-Steam yanamhlanje
IFleet White White: USS Minnesota (BB-22)
Top 8 Bruce Cockburn Iingoma zee-80s
Uthando olungenakulibaleka Iingoma zama-1930
Ama-Adjectives esebenzayo kwiSumumethi yakho
Ukuphendula kwiManzi okanye Isisombululo esinamandla
Ubulungu kwi-Academy yeMotion Picture Arts
Hobart noWilliam Smith Admissions
I-Asbury University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Northern Arizona University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
'Rick and Morty' I-Cast and Guest Stars
I-Earlham College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data